သတင်း - ဂီယာအုံ၏အခန်းကဏ္။
ဂီယာအုံ ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ ထိုကဲ့သို့သောလေရဟတ်တာဘိုင်၌ရှိသည်။ ဂီယာအုံသည်လေရဟတ်တာဘိုင်တွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသောအရေးကြီးသောစက်မှုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာလေဘီးမှထုတ်လုပ်သောစွမ်းအင်ကိုလေစွမ်းအား၏သက်ရောက်မှုအောက်မှလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ကိုဂျင်နရေတာထံသို့ထုတ်လွှင့်ရန်နှင့်သက်ဆိုင်ရာအလှည့်အရှိန်ကိုရရှိရန်ဖြစ်သည်။
များသောအားဖြင့်လေဘီး၏အရှိန်နှုန်းသည်အလွန်နည်းပါးပြီး၎င်းသည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန်အတွက်ထုတ်လုပ်သောမီးစက်လိုအပ်သောလည်ပတ်နှုန်းနှင့်အလွန်ဝေးကွာသည်။ ဂီယာအုံ၏ဂီယာတွဲ၏တိုးလာသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်၎င်းကိုသဘောပေါက်ရမည်။ ထို့ကြောင့်ဂီယာအုံအားလည်းတိုးပွားသောသေတ္တာဟုလည်းခေါ်သည်။
ဂီယာအုံသည်လေဘီးမှစွမ်းအားနှင့်ဂီယာထုတ်လွှင့်နေစဉ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်သောတုံ့ပြန်မှုစွမ်းအားကိုသယ်ဆောင်ထားသဖြင့်ပုံပျက်မှုကာကွယ်ရန်နှင့်ဂီယာအရည်အသွေးကိုသေချာစေရန်အင်အားနှင့်အခိုက်အတန့်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိရန်လုံလောက်သောတင်းကျပ်မှုရှိရမည်။ ဂီယာအုံကိုယ်ထည်၏ဒီဇိုင်းကို layout စီစဉ်ခြင်း၊ အပြောင်းအလဲနဲ့စုဝေးမှုအခြေအနေများ၊ လေတာဘိုင်မီးစက်၏စွမ်းအင်ထုတ်လွှင့်မှုအားစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့အတွက်အညီဆောင်ရွက်ရမည်။
2. ဂီယာ ဦး တည်ချက်ပြောင်းပါ။ ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စက်လည်ပတ်ကိရိယာနှစ်ခုကို သုံး၍ ဒေါင်လိုက်အားအခြားအလှည့်ရိုးသို့ပို့နိုင်သည်။
3. အလှည့် torque ကိုပြောင်းလဲပါ။ တူညီသောပါဝါအခြေအနေတွင်ဂီယာလည်ပတ်မြန်လေလေ၊ ရိုးတံပေါ်ရှိ torque နည်းလေလေဖြစ်သည်။
၄။ clutch function - အင်ဂျင်အားမူလချိတ်ဆက်ထားသောဂီယာနှစ်ခုအားခွဲထုတ်ခြင်းအားဖြင့်ဝန်မှခွဲခြားနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောဘရိတ် clutch အဖြစ်,
5. ပါဝါဖြန့်ဝေ။ ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂီယာအုံ၏အဓိက ၀ င်ရိုးမှတဆင့်ကျွန်ရိုးတံအမြောက်အမြားကိုမောင်းနှင်ရန်အင်ဂျင်တစ်လုံးကိုသုံးနိုင်သည်။ ဤသို့ဖြင့်အင်ဂျင်တစ်လုံး၏ဝန်ကိုမျိုးစုံမောင်းနှင်နိုင်သည်။
အခြားစက်မှုဂီယာအုံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါကလေစွမ်းအားကိုဂီယာအုံအားကျဉ်းမြောင်းသောအင်ဂျင်ခန်း၌မြေပြင်အထက်မီတာ ၁၀၀ ကျော်အထက်တွင်တပ်ဆင်ထားသဖြင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပမာဏနှင့်အလေးချိန်သည်အင်ဂျင်ခန်း၊ မျှော်စင်၊ အုတ်မြစ်၊ ယူနစ်၊ တပ်ဆင်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်၊ ထို့ကြောင့်အရွယ်အစားနှင့်အလေးချိန်ကိုလျှော့ချရန်အထူးအရေးကြီးသည်။ အလုံးစုံဒီဇိုင်းစင်မြင့်တွင်ဂီယာစနစ်ကိုအနိမ့်ဆုံးအသံအတိုးအကျယ်နှင့်အလေးချိန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်။ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်သင့်သည်။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဒီဇိုင်းသည်ဂီယာစွမ်းအားနှင့်အာကာသအခက်အခဲများနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရမည့်အချက်ကို အခြေခံ၍ ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၏အချိတ်အဆက်တိုင်းတွင်ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးကိုသေချာစေရမည် လည်ပတ်နေစဉ်ဂီယာအုံ၏လည်ပတ်မှုအခြေအနေ (အပူချိန်၊ တုန်ခါမှု၊ ဆီအပူချိန်နှင့်အရည်အသွေးပြောင်းလဲမှုစသည်တို့) ကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီစောင့်ကြည့်ပြီးနေ့စဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကိုသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီလုပ်ဆောင်ရမည်။